Down syndrome မဖြစ်အောင် ကြိုတင်ကာကွယ်လို့ရသလား? – BurmeseHearts
ယခုလက်ရှိအချိန်အထိ Down syndrome မဖြစ်အောင် ကာကွယ်နိုင်တဲ့ဆေး မတွေ့ရှိသေးသလို Down syndrome ရောဂါ လုံးဝပျောက်ကင်းသွားအောင် ကုသပေးနိုင်တဲ့ကုထုံးလည်း ရှာမတွေ့သေးပါဘူး။ Down syndrome ရောဂါ မွေးကတည်းကပါလာတဲ့ကလေးရဲ့ ရောဂါသက်သာအောင် တသက်တာ ဂရုစိုက်ကုသပြီး ပြုစုစောင့်ရှောက်မှုမျိုးသာ ပေးနိုင်ပါတယ်။
ဒါကြောင့် Down Syndrome နဲ့ မွေးလာတဲ့ကလေးဟာ တချိန် သူ့ရောဂါပျောက်ကင်းသွားမှာပါ။ အဆင်ပြေသွားမှာပါလို့ ကြိုတွက်ထားလို့ မရပါဘူး။
Down syndrome ကို ဘယ်အချိန်က စတင်ပြီး စမ်းသပ်သိရှိနိုင်မလဲ?
BurmeseHearts	 Dec 30, 2015 0
မိခင်လောင်းရဲ့ ခံစားချက်တွေဟာ ဗိုက်ထဲက ကလေးရဲ့…
ကိုယ်ဝန်ရှိရင် မူးလဲကျပြီး ပျို့အန်လေ့ရှိသလား?